Ogaden News Agency (ONA) – Gumaysiga Itoobiya oo Saraakiil EPRDF Katirsan Jeelka U Taxaabay.
Gumaysiga Itoobiya oo Saraakiil EPRDF Katirsan Jeelka U Taxaabay.
Posted by ONA Admin	/ December 30, 2016
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in ay xukuumada wayaanuhu xabsiga dhigtay qaar kamid ah saraakiisha wayaanaha.
Sida xogta aan kuhelay taliska guud ee wayaanaha ayaa amray in xabsiga ladhigo 24 qof oo katirsanaa xisbiga magac uyaalka ah ee EPRDF, warka ayaa intaas kudaraya in saraakiishan la xidh xidhay ay wayaanaha uhayeen xilal sar sare.
Afhayeen uhadlay xukuumada wayaanaha ayaa sheegay in ay saraakiishan la xidh xidhay sameeyeen musuq maasuq hase yeeshaa waxaa la ogaaday in saraakiisha loo xidh xidhay arimo laxidhiidha dhinaca siyaasada. Sida aan lawada socono xisbi kusheega EPRDF ayaa mar horaba kala tagay kadib markay kooxda TPLF oo xisbigan katirsanayd marooq satay taladii guud ahaan wadanka gaar ahaan xisbiga EPRDF.
Khilaafka xisbi kusgeegay EPRDF oo mudo dheer soo jiray ayaa kalifay in xabsiyada ay ku uraan saraakiil magac kulahayd xisbiga dhexdiisa isla markaana qaar saraakiisha kamid ah shaqadii ay hayeen laga casilay.
Sikastaba ha ahaatee iskaba daa in laxaliyo khilaafka EPRDF e waxaa siwayn usoo kobcaya kala qaybsanaanta ururka TPLF isagoo ukala jabay labo garab oo waawayn.